Isigaba samanje ekukhuleni komphakathi Russian kudinga izinyathelo eziyinkimbinkimbi neziphuthumayo ukuqinisa ukusebenza komthetho kanye nempi yokulwa zonke izinhlobo zobugebengu. Lesi sici kuyinto ikakhulukazi kusebenze futhi ezibalulekile nekusebenta amayunithi zokusebenza isinyathelo okuyinto kuxhomeke kakhulu ukuhlonza, nokuvinjelwa, ukucindezelwa futhi uphenyo zobugebengu yimpumelelo. izenzo nokusebenza-search ukudlala indima ebalulekile bangabonwa futhi ukuvezwa esifike ngesikhathi kwamacala abucayi ikakhulukazi, ethwele umonakalo omkhulu ukuze izakhamuzi futhi usongo ukuzinza ezweni lilonke.
Ngaphandle ukusebenza kwalesi iqoqo izinyathelo ngokuvamile akwenzeki ukuba lelisu inkinga lwezobulungiswa. Okokuqala, kuyafaneleka ukukhuluma mayelana amacala akuyona imvelo esobala esicashile futhi imisebenzi eyenziwa yi-lobugebengu obuhleliwe amaqembu. I share izinto ezinjalo ezingekho emthethweni Russian isakhiwo ubugebengu kuphezulu kakhulu.
Izinhlobo search imisebenzi zihlanganisa eziyinkimbinkimbi multi-level eziyinkimbinkimbi kophenyo ahlukahlukene. Ezinjalo njengoba ucwaningo zezakhamizi ukuze bathole ulwazi olufanele; imibuzo, kuhlanganise ezihlukahlukene izicelo database; ukuqoqa amasampula ezihlukahlukene ucwaningo bese Luhlatiyo; ukuthola, ukususwa nokutadisha izinto futhi iminonjana lapho kwenzeke ubulelesi; ukubhekwa imfihlo usebenzisa kufihlwe izindlela lobuchwepheshe isithombe op nevidiyo. Lokhu kungenzeka futhi ihlanganisa ukucabhela ucingo izingxoxo nge ukugunyazwa okufanele.
Ukucinga umsebenzi enezinto eziningi izici wezindlela. Ngokwesibonelo, ukusetshenziswa amasu ahlukahlukene ukumaska legendirovanie abasebenzi tekusebenta nekuwusebentisa e iqembu lobugebengu. Ngokwemvelo, lokhu kusho imisebenzi-search, lapho lezi zindlela zidinga ukuhlolwa yangempela futhi ikhumbula zonke izimo ezifanele, njenge: eqenjini linqoba yezenhlalakahle noma ungqimba, amasiko, imithetho yokuziphatha, imithetho nemikhuba. Konke lokhu kudinga ukutadisha ngokucophelela efaneleyo eliphakeme kanye umsebenzi wethulwa. Kufanele kuqashelwe ukuthi legendirovanie ingenye amasu ayisisekelo, okuncike iyiphi izinyathelo tekusebenta-search, uma kuziwa nokuqedwa amaqembu ezigelekeqe.
The kungenzeka usebenzisa idatha tekusebenta phakathi uphenyo futhi nezinqumo zokwahlulela babebeke umthetho, futhi ngokucacile kulawulwa Ikhodi Criminal Procedure. Kwakuvamile ukuba phakathi ezinye uphenyo bonke base ubufakazi siqukethe idatha kanye impahla oluyiqiniso etholwe izindlela okuphenya. Ngokuvamile ngesisekelo sezenzo okuphenya ezifana ukuhilizisana, kakhulu, iyona ulwazi olumayelana nokusebenza.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi imisebenzi-osesho kakhulu imvelo yabo ihlale sisonqenqemeni hhayi kuphela lokho umthetho okushoyo kodwa futhi izinkambiso jikelele kanye nezimiso zokuziphatha. Ngezinye izikhathi ebusweni kuyinto ongagxilile + ngakho futhi esikhashana ukuthi omunye isinyathelo okungalungile, kungaba okwanele ukuba ngezansi umthetho futhi kuhlanzekile ngokokuziphatha. Kulokhu, okuningi kuxhomeke endleleni ukukukhanyisa komthetho futhi bawuhloniphe ngokuqinile izihloko ezifanele soMthethosisekelo kanye Penal Code, nokuthi mhlawumbe okubaluleke nakakhulu kusukela izimfanelo kuyisiphazamiso esimisweni sokuhle nokubi abasebenzi wokusebenza.
Slovakia ifulege futhi elingenamikhono izingalo isimo
Ifomu Federal zomphakathi-indawo
Amathikithi Metallica ekhonsathini e Moscow
Inqubo yokuhlasela isiteleka ku-volleyball: indlela yokuqeqesha. Imithetho ye-volleyball
Uma uvala amanzi, ungabiza kuphi? Ubani onesibopho sokususa amanzi ashisayo nabandayo?
Kungani ukwenza ifilimu? encwadini iphupho ukutolika